Olole balaadhan oo Wacyigalineed oo Hay’adda ARC farriimo waxtar leh ugu gudbisay in ka badan 3,000 oo barakacayaal ah oo ku kala teedsan gobolada dalka – somalilandtoday.com
dhasheen daadad xoogan oo sii nugleeyay xaaladda nololeed ee qoysaska ku nool xeryahaasi.
Hadaba iyagoo ka jawaabaya xaaladda bini aadanimo ee xeryahaas ka jirta ayaa masuuliyiin kasocota haayada ARC international iyagoo kaashanaya Haayada qaramada midoobay u qaabilsan qoxootiyada ee UNHCR waxay wacyigalin ku saabsan fahanka iyo dhawrida xuquuqaha barakacayaasha oo taabanaysa xuquuqda waxbarasho ee caruurta, xuquuqda haweenka; gaar ahaan hooyooyinka xiliyada uurka, iyo dhalmada. Sidoo kale waxaa barakacayaasha lagu wacyigaliyay nadaafadda iyo fayadhawrka deegaanka ee xilliyada roobka
Haayadda ARC International iyadoo ka jawaabaysa dhawaaqyada xaaladda banii aadamnimo ee ka jirta xeryahan maaha markii koowaad ee ay wax ka qabato goobaha barakacayaasha, waxay haayadu dhawaan soo gaadhsiisay qoysaka barakacayaasha ah agabka aasaasigaa ee NFI (Non Food Items) oo ka kooban Hu’, Gogol, Weel, Saabuun, Jerikaano, iyo Baco una qaybisay qoysas gaadhaya 1,541.
Kooxda ka socotay haayadu waxay dadka ku booqanayeen goobohooda iyagoo meel fagaara ah kula kulmay bulshada qaybeheeda kaladuwan, gudiyada, macalimiinta iyo maamulka deegaanka, waxaa bulshada loo gudbiyay fariimihii wacyigalinta isla markaana fahan dheer laga siiyay xuquuqaha barakacayaasha iyadoo laagu gudbinayo luuqadooda hooyo iyo tusmayaal qoraal ah oo ay ku xardhan yihiin fariimaha wacyigalintu.
Gabagabadii waxaa hadal ka yidhi Siciid Maxamed oo ah masuul ka tirsan haayada ARC international waxaanu dardaaran usoo jeediyay bulshada sidii ay udhaqangalin lahaayeen ugana faa iidaysan lahaayeen wacyigalintaa. Gudoomiyayaashii deegaanada laga sameeyay wacyigelinta ayaa iyaguna dhinacooda mahad celin balaadhan ujeediyay hayada ARC International iyo UNHCR. Guddida Barakacayaasha ayaa iyaguna dhankooda uga mahad celiyay haayada ARC International sida ay ugu dadaalaan caawinta iyo ka warhaynta qoysaska danyarta ah ee ku nool xeryaha.